“होशियार ! धेरै विर्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ”(जानी राखौ) २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – ramechhapkhabar.com
विर्य खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय समाजको मान्यता भएकाले धेरै शक्ति खेर जान्छ भन्ने सोच छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। वीर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ।
सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व जायज नै लाग्छ। यो शक्ति आफैंमा ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण छ।”पोषणका दृष्टिले हेरिने शक्तिको कुरा गर्दा एक सामान्य व्यक्तिलाई १ हजार ८ सयदेखि २ हजार २ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ र एकपल्टको वीर्य स्खलनमा यस्तै १५ क्यालोरीजति हुन्छ।
यौनसम्पर्क गर्दा वा त्यस अघिपछिका शारीरिक क्रियाकलापदेखि लिङ्ग उत्तेजना, रस निस्कने, वीर्य स्खलनजस्ता कतिपय क्रिया-प्रक्रियामा पनि शक्ति (क्यालोरी) खर्च हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन, तर यौनसम्पर्कभन्दा हस्तमैथुनमा कम ऊर्जा खर्च हुन्छ। त्यसैले हस्तमैथुनलाई दुब्लोपनको दोष दिनु जायज छैन। बरु तपाईंले पोषण र व्यायाममा ध्यान दिनु।
घरमा लगाउनुहोस् यी विरुवा, जसले तान्छ चुम्बक जसरी पैसा, मिल्छ सधैँ लक्ष्मीको कृपा
काठमाडौँ । सबैको चाहना हुन्छ घर सुख, शान्ति, सुन्दर र सफा होस्। जसका लागि मानिसले घर बनाउँदा धार्मिक, वास्तुलगायतका अन्य निमयको पालना गरेर घर बनाउछन्। यसका लागी घरमा औषधीयुक्त गुणले भरिपूर्ण विरुवा रोप्नु पर्दछ। जसले गर्दा सामान्य विरामी हुदाँ प्रयोगमा आउनुका साथै घरपरिवारमा सकारात्मक माहौल बन्न सक्छ।
जो कोहीको चाहना हुन्छ आफूनो साथमा अपार धन दौतल होओस् भन्ने। यसका लागि धेरैले कडा मेहनत पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर मेहनत गरेजति फल प्राप्त हुँदैन्। त्यसैले मानिस वास्तु र ज्योतिष उपाय अप्नाउने गर्दछन्। धन वृद्धिका लागि कयौँ व्यक्तिले घरमा विभिन्न विरुवा पनि रोप्ने गर्दछन्। आज हामी तपाईलाई सकारात्मक उर्जा दिनुका साथसाथ चुम्बक जसरी पैसा तान्ने क्षमतायुक्त केही विरुवाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
जानौँ कुन कुन हुन् ती विरुवा ?
क्रासुलालाई मनी ट्री पनि भन्ने गरिन्छ। फेंगशुईमा यसको विशेष महत्व हुने गर्दछ। यस विरुवाले चुम्बक जसरी पैसालाई नजिक तान्ने गर्दछ। यो सानो विरुवा गाडा हरियो रंगको हुने गर्दछ। यसको पात चौडा हुने गर्दछ। यो विरुवा चारैतिर फैलने खाले हुन्छ।
यो विरुवालाई लगाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । यो विरुवा ल्याएर कुनै गमला वा जमिनमा लगाइदिएपछि यो आफै फैलिदै जाने गर्दछ। यो घाम वा जाडो जुन मौसमा पनि लगाउन सकिन्छ। यो विरुवाले सकारात्मक उर्जा र धनलाई आफ्नो तर्फ केन्द्रित गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। यसलाई घरको मुख्य द्वारको दाँयातर्फ लगाउनु पर्दछ। यसले घरमा धनको वर्षा ल्याउने गर्दछ।